शेरबहादुर देउवा कांग्रेस सभापतिमा निर्वाचित | MYAGDINEPAL
Home / फाेटाे फिचर / राष्ट्रिय समाचार / शेरबहादुर देउवा कांग्रेस सभापतिमा निर्वाचित
शेरबहादुर देउवा कांग्रेस सभापतिमा निर्वाचित
सभापतिमा निर्वाचित भएपछि खुशी मुद्रामा शेरबहादुर देउवा
देशको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसको सभापतिमा वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा भारी मतले निर्वाचित भएका छन् ।
देउवाले १ हजार ८२२ मत पाएका छन् भने कार्यवाहक सभापति समेत रहेका रामचन्द्र पौडेलले १ हजार २९६ मत ल्याएका छन् ।
सोमबार भएको दोस्रो चरणको निर्वाचनमा रामचन्द्र पौडेललाई ५ सय २६ मतान्तरले पराजित गर्दै देउवा कांग्रेसको सभापति बनेका हुन् । देउवाको जितसँगै नेपाली कांग्रेसले १९ वर्षपछि कोइराला परिवार बाहिरबाट सभापति पाएको छ ।
आइतबार भएको पहिलो चरणको मतदानमा देउवा मात्र ११ मतले सभापतिमा निर्वाचित हुन चुकेका थिए । तर, दोस्रो चरणमा देउवाले आफ्नो मत बढाउँदै सभापति बनेका छन् ।
कांग्रेसको निर्वाचन समितिका अनुसार सोमबार भएको दोस्रो चरणको निर्वाचनमा ३ हजार १२० मत खसेको थियो । तर, मत मत गणनाका क्रममा २० मत बढी भेटियो, जुन अधिकांश नमुना मत पत्रहरु थिए ।
सहमतिका आाधारमा सबैलाई खसेको मत मानेर तोकिएको मापदण्ड नपुगेका २२ मतलाई बदर गरिएको निर्वाचन समितिका सदस्य गोपालकृष्ण घिमिरेले बताए ।
१० औं र १२ औं महाधिवेशनमा सभापतिमा पराजय बेहोरेका देउवा १३ औं महाधिवेशनबाट कांग्रेसको सर्वोच्च पदमा पुग्न सफल भएका हुन् । पोखरामा भएको १० औं महाधिवेशनमा देउवा गिरिजाप्रसाद कोइराला र काठमाडौंमा भएको १२ औं महाधिवेशनमा सुशील कोइरालासँग पराजित भएका थिए ।
सुशील कोइरालाको निधन लगतै भएको महाधिवेशनबाट देशको सबैभन्दा ठुलो र पुरानो पार्टी नेतृत्वको बागडोर देउवामा हातमा आएको छ । ०५३ मा नवौबाट महाधिवेशन झन्डै २० बर्ष कोइराला परिवारमा नेतृत्व रहेको थियो ।
२०४८ यताका संसदीय निर्वाचनमा निरन्तर विजय यात्रा जारी राखेका देउवाले पार्टी नेतृत्वको आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा भने पटक-पटक हारेका थिए ।
नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन अन्तर्गत जिल्ला, नगर प्रतिनिधिहरु छनौटको बेला संस्थापन पक्षमा (त्यतिबेला जिवितै रहेका सुशील कोइराला पक्षका) प्रतिनिधि बढी आएको चर्चा चलेको थियो । काठमाडौं उपत्याकामै पनि काठमाडौं र ललितपुरमा देउवा पक्षभन्दा संस्थापन पक्षको बढी महाधिवेशन प्रतिनिधि आएको चर्चा थियो ।
कांग्रेसमा रहेको ६० (संस्थापन) र ४० (देउवा पक्ष) को विभाजन गिरीजा प्रसाद कोइराला जिवित रहँदा देखि सुशील कोइरालाको विरासतकोरुपमा पनि कायमै थियो । तर १३ औं महाधिवेशनले भने कांग्रेसमा यो ६०-४० को विभाजनको रेखा मेटाउने देखिएको छ । किन भने पहिलो चरणको निर्वाचनमै देउवाले ४० प्रतिशत भन्दा बढी मत प्राप्त गरिसकेका छन् । उनी ५० प्रतिशत भन्दा माथि जानका लागि केवल ११ मत बाधक बन्यो ।
कांग्रेसको विधानले सभापति पदमा दुईभन्दा बढी उम्मेदवार भए विजयी हुनका लागि कूल खसेको मतको ५० प्रतिशतभन्दा बढी ल्याउनु पर्ने ब्यवस्था गरेका कारण देउवा पहिलो चरणमा सभापति बन्न सकेनन् । सोही विधानकै कारण केवल ११ मतका कारण सभापति बन्नबाट चुकेका शेरबहादुर देउवा र उनका निकटतम प्रतिद्वन्दी रामचन्द्र पौडेलबीच दोश्रो चरणको मतदानमा २ पक्षीय भिडन्त हुँदैछ । तेश्रो बनेका कृष्णप्रसाद सिटौलाले दोश्रो चरणमा मतदान नै नगर्ने अवस्था सृजना गर्न आह्वान गर्दै आफू तटस्थ बस्ने घोषणा गरेपछि देउवाको जित थप सहज भएको छ ।
संस्थापनसँग सँधै रक्षात्मक (४० प्रतिशत)कोरुपमा रहेका देउवाले संस्थापनका २ उम्मेदवारले प्राप्त गरेको कुल मत भन्दा बढी मत ल्याए । आखिर किन कांग्रेस महाधिवेशन प्रतिनिधिले देउवालाई मत दिए ? यी हुन् देउवाले मत पाउनुका ५ कारणः
१. सुशीलको अवसान
महाधिवेशनको मुखमा सभापति सुशील कोइरालाको निधन हुनु कांग्रेसका लागि क्षति र दुखद् भएपनि देउवाका लागि भने चुनावी दृष्टिमा सुखद् घटना थियो । सुशील जिवित भएका भए संस्थापन विभाजित पनि हुँदैन्थ्यो र यस पटक पनि देउवा निकटतम प्रतिद्वन्दीमा सीमित हुन्थे ।
सुशीलको भौतिक अनुपस्थितिले संस्थापन छिन्न भिन्न भए भने सुशील पछिको विरासत कांग्रेसीजनका लागि देउवा नै लाग्यो । सुशीलपछिको विरासत उपसभापति रामचन्द्रले धान्न सक्छन् भन्ने विश्वास कांग्रेसीहरुमा नरहेको पहिलो चरणको मतदानले प्रष्ट देखाएको छ ।
२. पटक पटक प्रधानमन्त्री
शेर बहादुर देउवा कांग्रेसका बरिष्ठ नेता मात्र होइनन् । उनी ३ पटक देशको प्रधानमन्त्री भैसकेका ब्यक्ति हुन् । नेता देउवा २०४८, २०५१ र २०५६ का संसदीय निर्वाचन तथा विसं २०६४ र २०७० मा भएको संविधानसभाको निर्वाचनमा डडेलधुरा जिल्लाबाट विजयी देउवाले गृहमन्त्री तथा पटक पटक प्रधानमन्त्री समेतको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन् । विसं २०५९ मा प्रधानमन्त्री भएका देउवा त्यसको दुई वर्षपछि २०६१ सालमा पुनः प्रधानमन्त्री बनेका थिए ।
नेपाली काँग्रेसको विभाजनपछि उनि नेपाली काँग्रेस (प्रजातान्त्रिक)को सभापति बनेका थिए । काँग्रेस र काँग्रेस(प्रजातान्त्रिक)को एकतापछि उनि नेपाली काँग्रेसको वरिष्ठ नेता भएका हुन् । गिरिजाप्रसाद कोइराला जिवित हुँदा नै कोइराला परिवारसँग टक्कर लिने देउवालाई कांग्रेसीहरुले कोइराला परिवारबाट बाहिर आएको नेतृत्व सुम्पिनु उचित हुने ठानेको देखिएको छ ।
३. तानिएका प्रभावशाली नेता
१३ औं महाधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा सभापति सुशील कोइरालाको निधनले संस्थापन पक्ष भनिने गुट कमजोर बन्न पुग्यो । छिन्न भिन्न बनेको संस्थापन गुटको मत विभाजित हुँदा देउवा पक्षलाई भने फाइदा भयो । किन भने सुशील जिवित हुँदा देखि नै प्रभावशाली नेताहरुले देउवा क्याम्पमा बसाइ सर्ने क्रम सुशीलको निधनपछि झनै बढ्यो । महाधिवेशनको मुखमा कित्ता परिवर्तन गर्दै महामन्त्री हात पार्ने दौडिएका अर्जुननरसिंह केसी मात्र होइन पाका नेता केबी गुरुङ र युवा नेता विश्वप्रकाश शर्मा समेत देउवा खेमामा पुगे । उनीहरुले क्षेत्रीय प्रतिनिधि चयनमा ठूलो प्रभाव पारेको बताइन्छ । उनीहरुमात्र होइन भ्रष्टाचारी करार भैसकेका हिन्दुवादी खुमबहादुर खड्का र गोविन्दराज जोशीले दिएको साथ पनि देउवाका लागि फलिफाप नै भएको देखियो । पूर्वसभामुख तारानाथ रानाभाट चर्चित नेता फर्मुल्ला मन्सुर र कोइराला निकटका चन्द्र भण्डारीले पनि संस्थापन छोडेर देउवालाई साथ दिएपछि उनको पक्षमा माहौल बढेको थियो ।
४. महाधिवेशन स्थलको माहौल
महाधिवेसनस्थलमा देउवा पक्ष हावी नै देखियो । महाधिवेशन उद्घाटन हुने दिन विहान प्रकाशित एक दैनिकले एक सर्वेक्षणको हवाला दिँदै देउवाको पक्षमा बहुमत हुन सक्ने संकेत दिएको थियो । यसको मानसिक असर महाधिवेशन उद्घाटन देखि नै देखियो । शुरु देखि नै अधिकाँश मिडियामा देउवाका आक्रामक प्रचार शैली र जित्ने दावीहरुले बढी स्थान पाइरहेका थिए । कांग्रेस महाधिवेशनको बन्द सत्र भित्र सुरु भइरहदा भृकुटीमण्ड बाहिर समर्थकहरुले उम्मेदवारी घोषणा गरेका नेताहरुलाई भोट माग्न व्यस्त छन् । पद्मोदय मोडदेखि रत्नपार्कसम्म नै पचार सामाग्री लिएर कांग्रेसका कार्यकर्ता दौडधुप गरिरहेका छन् । देउवा पक्षले प्रचारलाई आक्रमक बनाएर महाधिवेशनस्थललाई एक प्रकारले मानसिकरुपमा कब्जा नै गरे । देउडा नाचदेखि देउवाको पक्षमा ताली बजार कार्यकर्ताहरुले प्रचार गरिरहेका देखिन्थे । देउवाका फोटो अंकित टोपी लगाएर देउवा दाई हाइहाइ भन्ने नारा लगाएर उनको पक्षमा महोल बनाइरहँदा रामचन्द्र पौडेल र कृष्ण सिटौला पक्षधरका कार्यकर्ताहरुले भने चुपचाप जस्तै देखिएका थिए । यसको असर पनि मतदानमा देखिएको छ ।
५. अनिर्णितको साथ देउवालाई
महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन देखि नै संस्थापन र देउवा पक्ष भनेर विभाजित मानसिकतामा रहेका प्रतिनिधि बाहेक कांग्रेसमा महत्वपूर्ण तप्का ब्यक्ति हेरेर निर्णय गर्ने तप्का पनि छ । चलायनमान र अनिर्णीत मत अन्तिम समयमा आएर देउवाको पक्षमा देखियो ।
कांग्रेसका ३ हजार १ सय ६१ मतदातामध्ये करिब दस प्रतिशत मत अनिर्णीत र चलायमान रहेको अनुमान गरिएको थियो । सो मत नै देउवाको पक्षमा पल्ला भारी बनाउन काफी भयो । यस पटक दुवै पक्षले आफ्ना प्रतिनिधि हावी हुने दावी गरेपनि नयाँ प्रतिनिधि बढी आएकैले प्रत्याशीहरू ढुक्क भने थिएनन् । तर काठमाडौं आएर महाधिवेशन शुरु भएपछि निर्णय लिएका ‘अनिर्णित’हरु देउवा पक्षमा निर्णायक देखिए । जसका कारण देउवा पक्षले यस अघि कांग्रेसमा स्थापित ६०-४० को मान्यतालाई भत्काउन सफल भएको छ ।
मतपरीणाम आएपछ निराश मुद्रामा रामचन्द्र पौडेल
नेपाली कांग्रेसमा वैचारिक एवं सादगी नेताको छवि बनाएका रामचन्द्र पौडेल शेरबहादुर देउवासँग पार्टी सभापतिमा भारी मतले पराजित भएका छन् । यो पराजयसँगै पौडेलको राजनीतिक भविश्य संकटमा परेको छ ।
रामचन्द्र पौडेलको पराजयसँगै प्रकाशमान सिंह, डा. रामशरण महत र सुजाता कोइराला लगायतका नेताहरुको राजनीतिक ‘करिअर’मा पनि ग्रहण लाग्ने संकेत देखिएको छ ।
रामचन्द्र पौडेलतिर लागेका डा. शशांक कोइराला महामन्त्रीमा चुनाव लडेका छन्, उनको राजनीतिक भविश्यको छिनोफानो सानेपामा हुने मतगणनाले लगाउनेछ । पौडेलको प्यानलमा रहेका केन्द्रीय सदस्यहरुको करिअर पनि त्यही सानेपामा रहेका मतपेटिकाले निर्धारण गर्नेछन् ।
हुनत शेरबहादुर देउवाले सभापतिमा जित्नुअगावै भनिसकेका छन् कि मैले जितें भने कसैले पनि कांग्रेस छाड्नुपर्दैन, म सबैलाई साथैमा लिएर, कसैलाई भेदभाव नगरिकन अगाडि बढ्नेछु ।
तर, देउवाले यसो भनिरहँदा उनले जीत हात पारेकै दिन उनी निकटका नेता वालकृष्ण खाँडले भनिसकेका छन् कि अबको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा हुन् । यो अवस्थामा एउटा गम्भीर प्रश्न के आउँछ भने रामचन्द्र पौडेल, जसले प्रधानमन्त्रीका लागि १७ पटकसम्म असफल प्रयास गरेका थिए, अब उनको प्रधानमन्त्री बन्ने पालो कहिले आउला ?
सम्भवतः अब देउवाको चार वर्षे कार्यकालमा रामचन्द्र पौडेललाई प्रधानमन्त्री बनाउन देउवालाई उनकै गुटका नेताहरुले दिने छैनन् । र, कांग्रेसमा देउवा गुट बलियोसँग हावी हुनेछ । देउवाले चाहँदैमा उनको कोटरीले कोइराला, पौडेल वा महतहरुलाई ठाउँ दिने अनुमान लगाउन सकिँदैन ।
नेपाली कांग्रेसमा कोइराला समूहको बर्चश्व रहेका बेला घुमाई-घुमाई सत्ताको स्वाद चाख्दै आएका डा. रामशरण महतले पछिल्लो समययमा आफैं सभापतिमा उठ्छु भन्दै रामचन्द्र पौडेलसँग बार्गेनिङ गरेका थिए । तर, आफूलाई पार्टीभित्रको एकमात्र अर्थविद् ठान्दै आएका डा. महतको राजनीति अब धरापमा परेको छ ।
अझै देउवा पक्षका नुवाकोटे नेता अर्जुननरसिंह केसीले महामन्त्री जिते भने रामशरण महतका लागि आगामी राजनीतिक यात्रामा थप दुरहपूर्ण हुन सक्छ ।
देउवाको उदयसँगै रामशरण महत सरह अर्का दुखिया पात्र बन्न पुगेका छन् गणेशमानपसुत्र प्रकाशमान सिंह । देउवा क्याम्प छाडेर कोइराला क्याम्पतिर लागेर सुशील कोइरालाको साथ लिई सत्ताको राम्रो रसस्वादन गरेका सिंहले अन्तिम समयमा पनि देउवालाई सघाएनन् र रामचन्द्रसँगै पदको बार्गेनिङ गरिरहे । फलतः सिंहको राजनीतिक भविश्य पनि रामचन्द्रको पराजयसँगै संकटमा परेको छ ।
त्यसैगरी सभापतिमा चुनाव लड्ने बताएर अन्तिममा रामचन्द्रसँग तीनबुँदे सहमति गरेकी सुजाता कोइरालाको पार्टी उपसभापति बन्ने सपनामा पनि देउवाको जितले गतिलो ठेस लगाइदिएको छ ।
नेपाली कांग्रेसमा कोइराला खेमाबाट उदाएका प्रभावशाली नेता महेश आचार्य, देउवा समूहबाट पौडेल समूहतिर लागेका डा. मीनेन्द्र रिजाल लगायतका क्षमतावान नेताहरुलाई अब देउवाले कसरी साथमा लिएर हिँड्छन् भन्ने प्रश्न छ ।
बरु रामचन्द्र पौडेलसँग जोरी खोजेर बेग्लै गुट खडा गरेका कष्ण सिटौलाले भने आफ्नो राजनीतिक भविश्य डा. रामशरण महत र प्रकाशमान सिंहले भन्दा बुद्धिमत्तापूर्ण ढंगबाट सुरक्षित गरेका छन् ।
केन्द्रीय समितिमा कस्तो शक्ति सन्तुलन बन्ला ?
नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय पदाधिकारी र केन्द्रीय कार्यसमितिमा पौडेल वा देउवासमूहमध्ये कसको उपस्थिति बलियो होला भन्ने विषयले अब रामचन्द्र पौडेल समूहको भविश्यलाई निर्धारण गर्नेछ ।
सभापतिमा देउवाले जिते पनि महामन्त्री, कोषाध्यक्षमा रामचन्द्र वा सिटौला समूहका व्यक्तिहरुले जिते भने देउवा समूह सन्तुलित हुन बाध्य हुन्छ । यसमा केन्द्रीय सदस्यहरुको नतिजा कस्तो आउँछ भन्ने विषयले बढी महत्व राख्छ ।
यदि महामन्त्रीलगायत र केन्द्रीय कार्यसमितिमा रामचन्द्रको बलियो उपस्थिति रह्यो भने उनको राजनीतिक भविश्य सकिएको ठहर गर्न मिल्दैन । त्यो अवस्थामा अर्को कार्यकालमा पौडेलले फेरि नेपाली कांग्रेसलाई आफ्नो पक्षमा पार्न सक्ने बलियो सम्भावना रहन्छ ।
तर, त्यतिबेलासम्म पौडेलले प्रभावकारी भूमिका खेल्न सकेनन् भने कृष्ण सिटौला, गगन थापा वा अरु नै कोही देउवाको विकल्पका रुपमा अगाडि आउन सक्ने सम्भावनालाई पनि अस्वीकार गर्न सकिँदैन ।
महाधिवेशनमा रामचन्द्र पौडेलले जुन सम्मानजनक मत ल्याएका छन्, त्यसले देउवाका विपक्षीहरु कमजोर छैनन् भन्ने स्पष्ट पारेको छ ।
र, अर्को पनि तथ्य के छ भने देउवा पक्षमा रहेका केही भ्रष्ट नेताहरुका कारण नेपाली कांग्रेस चाँडै नै बदनाम हुने र सत्ताको फोहोरी खेलमा लागेर कार्यकर्तामा वितृष्णा जगाउने भूमिका देउवा पक्षका नेताहरुले खेल्न सक्छन् । यो स्थितिको फाइदा उठाउँदै पौडेल समूहले फेरि आफूलाई पार्टीमा स्थापित गर्ने सम्भावना रहन्छ ।